ကြေးနီမိုင်း ကို ဆက်လုပ် ဖို့ပြောတဲ့ ဒေါ်စု ပြည်သူ တွေ က မျက်မုန်းကျိုး | Freedom News Group
ကြေးနီမိုင်း ကို ဆက်လုပ် ဖို့ပြောတဲ့ ဒေါ်စု ပြည်သူ တွေ က မျက်မုန်းကျိုး
by FNG on March 13, 2013	အေးအေးစိုးဝင်း ၊ ၊ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာထွက် ပြီးသည်.နောက် တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေက သူမကို အလွန်ဒေါသထွက်စိတ်ဆိုးနေတဲ.အရှိန် ထိုးတက်လာခဲ.တာ မြန်မာ.
ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်စု ခု သိသွားပါပြီ။
သူမ ကြီးမှုးတဲ. ကော်မရှင်အဖွဲ.ဟာ ဆန္ဒပြသူအများအပြားကို ထိခိုက် ဒဏ်ရာရအောင်
လုပ်ခဲ.သူတွေကို အရေးယူပေးဖို.ပျက်ကွက်တဲ.အပြင်၊ လူတွေအကြီးအကျယ် ကန်.
ကွက်တဲ. တစ် ဘီလီယံတန်ဘိုး ရှိ မုံရွာ ကြေးနီတောင် စီမံကိန်းကို ဆက်ခွင်.ပြုရမယ်လို. တိုက်တွန်းခဲ.တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း မှာ ဆန္ဒပြသူတွေကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ.၀င်တွေက မီးသတ်ကားရေပန်းတွေ မီးလောင်ဗုံးတွေ သုံးပြီး အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ.အပြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု
ကြည် ကြီးမှုးတဲ. ကော်မရှင် တစ်ရပ်ကို ဖွဲ.ခဲ.တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကြေးနီမိုင်းဟာ ရန်ကုန်နဲ. မိုင်ပေါင်း ၄၅၀ ကွာဝေးပြီး မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ အကြီးဆုံး
သတ္တုမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်စစ်ကုမ္ပဏီ နဲ. တရုတ်လက်နက်ခဲယမ်းကုမ္ပဏီ၏
ဒေသခံရွာသားတွေက ဒီကြေးနီတောင် စီမံကိန်းကို လုံးဝမလိုလား၊ ဆန်.ကျင်ခဲ.ကြတာကြာ
ပါပြီ။ ဒီစီမံကိန်းကြောင်. သူတို. ပိုင် လယ်ယာခြံမြေ ဧက ၈၀၀၀ ကျော် မတရား အသိမ်းခံရတယ်။
လူပေါင်းထောင်သောင်းချီပြီ ယာမဲ. မြေမဲ. အိုးအိမ်မဲ.ဖြစ်ခဲ.ရပါတယ်။ ဒီ.အပြင် သူတို.ကျေး
လက်ဒေသ တခုလုံးမှာ သဘာဝ ရေမြေ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်ဆီးမှု တွေက တားမန်ုင်ဆီးမရဖြစ်ခဲ.
တနိုင်ငံလုံးက ဒီလို လုပ်ရပ်ကို အပြင်းအထန်ရှုံ.ချတဲ.အခါ သမ္မတသိန်းစိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
ကော်မရှင်ဖွဲ.ပေးပြီး စုံစမ်းသမှုပြုစေခဲ.ပါတယ်။ ဒါပေမဲ. ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာကြောင်. မီးလောင်ရာလေပင်.ဆိုသလို လူတွေဖက်ကပိုပြီးတောင် မကျေနပ်မှုတွေကို ပြသထုတ်ဖေါ်နေကြပါတယ်။
အစိုးရဖက်ကတော. အစီရင်ခံစာမထွက်ခင်အထိ သူတို.သုံးခဲ.တာ ဖေါ.စဖရပ်ပါဝင်တဲ. မီးလောင်ဗုံးမဟုတ်ပါဘူးလို. ဗြောင် ငြင်းဆိုခဲ.တာပါ။ ခုတော.၊ အစီရင်ခံစာက သူတို. အစ
က ငြင်းထားတာကို ၀န်ခံခဲ.တယ်။
ဒီ.အပြင်- ကျူးလွန်ခဲ.သူတွေကို အရေးယူဖို. တလုံးမှ မဆိုထားတဲ. ကော်မရှင်ကပဲ ဒီမိုင်းလုပ်
ငန်းကို ဆက်လက်ခွင်.ပြုလုပ်ဆောင်ရမယ်လို. အကြုံ့ပြုခဲ.တာမို. ဒီအချက်က ထင်းထင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်။
အစီရင်ခံစာက မိုင်းလုပ်ငန်းကြောင်. သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်မှု ရှိကောင်း ရှိနိုင်
မယ်လို. ခန်.မှန်းထားပေမဲ. တဖက်မှာလည်း ဒေသခံတွေ အတွက်အလုပ်အကိုင် အခွင်.အလန်း
တွေ ရရှိနိုင်ကြောင်း၊ ချွေးသိပ်ပြခဲ.ပါတယ်။
ရပ်လိုက်ရင် တရုပ်နဲ.တင်းမာမှု ဖြစ်မှာ။ မရပ်သင်.၊ မဖြစ်သင်.လို.ဆိုတဲ. ဆင်ခြေပေးခဲ.တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာ က မြေယာ ဆုံးရှုံးတဲ. တောင်သူလယ်သမားတွေကို နစ်နာကြေးရော်ကြေးပေး သင်
ဆန္ဒပြခဲ.သူတေါကတော. ဒေါသတကြီးနှင်.ဒီအစီရင်ခံစာကို တုန်.ပြန်ကြပါတယ်။ အထက်မြန်မာပြည်
ကရှေ.နေ ကိုသိန်းသန်းဦးက ဧရာဝတီသတင်းဌာနကို ဤသို.ဆိုပါတယ်။
–ကော်မရှင်ရဲ.အဖြေက လုံးလုံး မလုံလောက်ဘူးဗျ၊ ကော်မရှင်.၏တွေ.ရှိချက်တွေအပေါ်ကျန်ာတို.
သွားအားကိုးနေလို.မရတော.ဘူး။ သူတို.က ဆန္ဒပြသူတေါက ဥပဒေကိုချိုးဖေါက်တယ်တဲ.။ ကဲ-ဒါဆို ရဲ
ကရော ဥပဒေမချိုးဖေါက်လို.လား။ အစိုးရက နှစ်ဖက်စလုံးကို သေသေချာချာ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြိး ထိုက်သင်.သလို ပြစ်ဒဏ်ပေးသင်.တယ်–
— ဦးဇင်း မနက်ဖန်ကျရင် ဒေသခံ တွေနဲ. ဘာဆက်လုပ်သင်.သလဲဆိုတာ သွားတွေ.ဆွေးနွေးကြည်.ပါဦးမယ်။ ဦးဇင်းတို.ဒေသခံတွေကတော. ဆက် ဆန္ဒပြရမှာပါပဲ–လို. မိန်.ဆိုခဲ.ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော.၊ သူမ ယူထားတဲ. အခန်းကဏ္ဍအရ ဒီလာမဲ. ဗုဒ္ဓဟူးမှာ ကြေးနီတောင်မိုင်း
တွင်းတွေစီသွားပြီး စကားပြောဆိုရဦးမှာပါ။ အဓိကကတော.၊ ပြီးခဲ.တဲ. မနှစ်နွေဦး မြန်မာလွှတ်တော်မှာ အရွေးခံရပြီးကတည်းက ပင်မနိုင်ငံရေး စည်းထဲက သူမလုပ်ခဲ.သမျှ အပေးအယူနည်းနာတွေကို (ရွာသူရွာသားတွေအား) အထူးပြု ပြောကြာ:မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိသျှ သတင်းစာ Independent တွင် ပါရှိသည့် Aung San Suu Kyi faces mounting anger from
Burmese activists over her support for controversial copper mine ကို အေးအေးစိုးဝင်း က ဘာ
သာ ပြန်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	From: သတင်း, အတွေးအမြင်, ပြည်တွင်းသတင်း, ပြည်ပသတင်း	← ပုပ် ရဟန်းမင်းကြီး ရွေးချယ်ပွဲ စပြီ
လက်ပတောင်းတောင် အရေး ကော်မရှင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် “ရှေ့ နေကြီး ဦးအောင်သိန်းရဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်” →
ွှအဲဒီလူတစုကို အရင်ဖေါ်ထုတ်သင်.ပါတယ် “ဦးသိန်းကိုပြောထား။ ဒေသခံက အော်သင့်ရင် အော်ပေးလိုက်။ တောင်ပေါ် မှာ ဖုန်းဘယ်သူ ကိုင်ထားလဲ။ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ပြီးသွားပြီလား တကယ်လို့ အဲဒီဘက်ကို ဒေါ်စုလမ်းကြောင်း မတော်တဆ ဖြတ်ရင် လူထုကို ကြွေးကြော်သံ တင်ပေးလိုက်၊ ပုဒ်မ ၁၄၄ ရုပ်ဖို့၊ သံဃာတွေကို မီးလောင်ဗုံး တရားခံ ဖော်ထုတ်ဖို့၊ ကော်မရှင် အလိုမရှိ၊ စီမံကိန်း ရုပ်သိမ်းရေး …. ဒါပဲ တင်ပေးလိုက်” “ရွှေညဝါကို ဆည်တည်းကို ရွှေ့ထား”၊ “အဖြူ လေးယောက်ကို တောင်ပေါ်က ပြန်ဆွဲ ချခဲ့တော့” စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
( Voice Weekly )
March 16, 2013	kyaw kyaw	#
let’s hope for peaceful ending !
March 14, 2013	minsoe	#
It is long time that i didn’t admire her.
March 13, 2013	poehut	#
တိုင်းပြည်ချွတ်ချုံကျနေတာ မွဲပြာကျနေတာကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေးပြန်ဦးမော့စေဖို့ နောင်အနာဂါတ်အတွက် မျှော်တွေးထားတဲ့ ဘက်စုံထောင့်စုံတဲ့ အစီရင်ခံစာလို့မြင်ပါတယ်။ ကိုနေလင်းပြောသွားတာကိုလုံးဝထောက်ခံပါတယ်။ အန်တီစုအောင်မြင်ပါစေ ကျန်းမာပါစေ ဘေးကင်းပါစေ။ တကယ်တမ်းတာဝန်ရှိတာ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဘာမှသေချာမစဉ်းစားဘဲ တဘို့တည်းရှိတဲ့ ကြည့်တဲ့ နွားတွေ (နွားကမှသူတော်ကောင်းဖြစ်နေဦးမယ်) လူစိတ်မရှိတဲ့ ကျက်သရေတုန်းတွေလုပ်သွားတာလေ။ အန်တီကဒါတွေကို တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြေရှင်းပေးနေရတယ်။
ပြောဦးမယ် အရေးယူရမှာက အစိုးရတာဝန် အန်တီတာဝန်မဟုတ်ဘူး။ အန်တီက မြင်တာကိုချပြရမှာ သုံးသပ်ပြတာ အဲဒါတွေကိုဖတ်ပြီး အက်ရှင်ယူရမှာက လက်ရှိအစိုးရတာဝန်။
March 13, 2013	Zaw	#
ကော်မရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာကို ဒေသခံတွေသေချာစွာ ဖတ်သင့်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်တယ်သာပြောနေတာ။ အစီရင် ခံစာမှာ ဖော်ပြထားတာတွေကို သေသေချာချာ သိထားပုံတောင်မပေါ်ပါဘူး ။ Demonstrate လုပ်တာနဲ့ပြေလည်မယ့်အရာမဟုတ်ပဲ ၊ ညှိနိူင်းဆွေးနွေးမူနဲ့အဖြေရှာရမှာပါ။ ရသင့်ရထိုက်တာတွေ ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကုပဏီိတွေကို Social responsibility တွေ ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တောင်းဆိုသင့်ပါတယ်။
ရေရှည်ကို မျှော်ကြည့်နိုင်ဖို့ ဒေသခံခေါင်းဆောင်တွေအမြင်ကျယ်ရပါမယ်။ အမြင်မကျယ်ပဲ ဒီအတိုင်းဆက်
လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ဆက်တွဲရလဒ်ကို ဒေသခံတွေတာဝန်ယူရပါမယ်။ မိမိရဲ့အတ္တကိုသာ ရှေ့တန်း
မတင်သင့်ပါဘူး ။ ဆန္ဒပြတိုင်း အလျှော့ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ အသိဟာနည်းလမ်းမှန်မဟုတ်ပါဘူး ။ ညှိနိူင်းဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အဖြေရှာပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
March 15, 2013	Su Su Kyi	#
i support mother su, right decision asacountry leader, I am still and always believing in mother su.
I think it is not mother su’ duty to punish those criminal. If so, what are the so called police doing?
March 13, 2013	Nay Lynn	#
အစီရင်ခံစာအစအဆုံးကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန်ဖတ်ကြည့်ရင် ကော်မရှင်ရဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးနောင်အနာဂတ်ကောင်းစားရေးကိုရှေးရှုထားတဲ့ စေတနာကိုသိမြင်နိုင်ကြမှာပါ….
လက်ပံတောင်းတောင်က ဒေသခံပြည်သူများ အမေစုနဲ့ ကော်မရှင်ရဲ့ စေတနာနဲ့ သဘောထားကို သဘောပေါက်နားလည်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်…
March 13, 2013	Shwe Pu Lay	#
လက်တွေကျတော့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အမေစုကို အာပေးနေတဲ့သူတွေကိုတော့ အံ့သြလို့ကိုမဆုံးပါဘူး လက်တွေကျဘာမှလည်းမလုပ်ပေးနိုင် လေပဲပြစ်နေတယ် ဘာလုပ်မလည်းးးးးးး ပြည်သူလူထုကတော့သူ့အတွက်ဆို အသက်ပေးလို့ပေး သေတဲ့ကျောင်းသားကသေ ဥပမာ 8888 ကိုပဲကြည့် ဘာတွေဖြစ်လည်းဆိုတာ အကျယ်ချုပ်တုန်းကတော့တစ်မျိုးအခုအပြင်ရောက်တော့လည်း လိုက်ဟောပြောတယ် စည်းရုံးတယ် ဘာတစ်ခုမှလည်းဖြစ်မလားဘူး အဖေနဲ့သမီး ရေနဲ့ဆီပဲ :)
March 13, 2013	Comments are closed.
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,727,722 hits